Inwe ọrụ Mkpu
Home > Ngwaahịa > Inwe ọrụ Mkpu (Total 9 Ngwaahịa maka Inwe ọrụ Mkpu)
Inwe ọrụ Mkpu - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
Anyị bụ ndị ọkachamara Inwe ọrụ Mkpu manufacturers & suppliers / factory from China. Ebube Inwe ọrụ Mkpu na akwa dị elu dịka obere ọnụahịa / ọnụ ala, otu n'ime Inwe ọrụ Mkpu na-eduzi ụdị aha si China, ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD .
Igwe otutu Igwe ọkụ na-acha ọkụ ọkụ
Tag: Igwe redio dị iche iche , Inwe ọrụ mkpu , Njikwa Ike Ntuziaka
Igwe redio dị iche iche . Na ọrụ SOS mkpu , ọ pụkwara iji ya dị ka oriọna, ọkụ na oriọna oriọna. N'ọnọdụ nsogbu, enwere ike iji ya na-akpọ maka enyemaka na flash, ike nke akwụkwọ ntuziaka , nkedo aka na USB. O nwere FM / AM / NOAA, redio mgbasa...
Akwa - arụmọrụ
Tag: Kọmitii batrị na-ekpuchi , Ogwe Nchekwa Ike Ntanetị , Ogige igwe na-echekwa ogwe
Akpanyere igwe kristal a na-ejikọta ya na kristal kristal na-ejikọta ya. Mgbe ìhè anyanwụ na-enwu, ogige ndị dị na mbara igwe dị ugbu a na nke volta, na-agafe na ụlọ ọrụ na-achịkwa, na-ebufe batrị. N'ihi mgbanwe ya na ọrụ nchịkọta na arụmọrụ dị...
Ngwaọrụ na-emepụta ihe ọhụụ na-emepụta na USB USB
Tag: Ubara Igwe Igwe , Fọọnụ ọkụ ọkụ anyanwụ , Okpokoro Mgba Igwe
Anyanwụ na-enwu n'elu ụwa, ọ dịghịkwa ebe nrụgide obodo, n'agbanyeghị ala ma ọ bụ oké osimiri, n'agbanyeghị ugwu ma ọ bụ agwaetiti, dị n'ebe nile, nwere ike ịmepụta ya ma jiri ya mee ihe, dị mfe nchịkọta, ọ dịghịkwa mkpa maka ntinye...
Igwe ọkụ na-acha ọkụ na-arụ ọrụ dị iche iche
Tag: Njikọ nke , Aisle Light , Mbara Igwe Okporo Ụzọ
Ejiri okpukpu uhie nke igwe na-arụ ọrụ dị iche, nke dị elu, na-enwu ọkụ ruo ihe dị ka awa 15. 6V polycristalline silicon solar panels, 10W, na-etinye ihe karịrị awa ise nke ìhè, hụ oge ọkụ ọkụ oge n'abalị. Elu àgwà ikanam ìhè isi, inogide ọkụ....
N'èzí n'ikuku ana enweta n'otutu-arụ ọrụ anyanwụ LED Mberede Flashlight Redio
Tag: Ụdị Ngwado Ụba , Redio abụọ , Na Ịdọ aka ná ntị Flash
Nke a bụ ihe dị iche iche na-arụ ọrụ na mbara igwe na-acha ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ, na-arụ ọrụ nke redio. Ọ na-akwado ọtụtụ usoro nkwụnye ọkụ , nke nwere ike ịgbaghara ya site na ike anyanwụ. N'oge mmiri ozuzo, a pụkwara iji ya mee ka ọkụ...
Igwe ọkụ redio na-arụ ọrụ na mbara igwe dị iche iche
Tag: Igwe ọkụ na-enwu ume nke obere obere ọkụ okwu , Igwe ọkụ redio nke anyanwụ dị iche iche , Obere Igwe Igwe Igwe n'èzí
Igwe ihe ntanetị nwere ike na-ese ụdị ekwentị ọ bụla ma ọ bụ ngwaahịa dijitalụ na anyanwụ. Ọ dịghị mkpa ka ịchọọ ọkụ na-acha ọkụ, ọbụla na ebe ọkụ zuru oke, dịka windo, mbara ihu, ọbụna oriọna fluorescence, ọkụ ọkụ anwụ anwụ pụkwara ịgbagha, mmiri...
Inwe ọrụ Mkpu akwa si China, Direct Zụta si China na-eduga ndị nrụpụta na ọnụahịa ụlọ ọrụ dị ala. Chọta akwa Inwe ọrụ Mkpu ngwaahịa na ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD ma nweta akwa mma Inwe ọrụ Mkpu kpọmkwem site na a pụrụ ịtụkwasị obi Chinese Inwe ọrụ Mkpu wholesalers & suppliers. Zipu ihe ị chọrọ ịchọrọ & Mee nzaghachi ozugbo.
Direct Ugbu a Brushless Agriculture ịgba Submersible ọkụ